WHIPPET DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Whippet Dog Macluumaadka iyo Sawirada
Melody, waa gabar 3 jir ah oo la yiraahdo Whippet oo u dhalatay dalka Griiga
Liiska eeyaha Whippet Mix Breed
WIH nadiif ah
Terry jiir madow iyo bunni ah
Whippet waa aragti arag dhexdhexaad ah oo umuuqata ina adeerkeed Greyhound . Qalfoofku waa dheer yahay oo wuu ku tiirsan yahay meel ballaadhan oo ballaadhan oo u dhexeeya dhegaha. Xuubka waa dheer yahay iyadoo aan la joojin karin, sanka ayuu taabanayaa. Sanka waa madow, buluug mugdi ah ama bunni madow, labada dambe oo aad u madow waxay u muuqdaan madow. Ilkaha waxay ku kulmaan qaniinyada maqaska. Dhagaha yaryar, ubax ayaa gadaal loo hayaa, laalaabaa oo la dareeraa marka ay faraxsan yihiin. Indhaha qaabka oval-ka u eg waa midab madow. Lugaha hore waa toos oo cagaha waa dhumuc weyn yihiin, ama bisad ama bakayle la mid ah. Dabada ayaa dheer, dhibiconaya ilaa hal dhibic. Waxaa lagu hayaa meel hoose iyada oo in yar oo qalooca kor u dhow dhamaadka, oo gaadhay ugu yaraan hock. Mararka qaarkood waxaa la saaraa goynta. Koodhka gaaban, siman wuxuu ku yimaadaa midabbo oo dhan oo ay ku jiraan gogol, madow, casaan, fawn, shabeel cad ama buluug buluug ah, midab adag ama isku dhafan.
Whippetku waa mid caqli badan, noole ah, kalgacal leh, macaan oo dabacsan. Saaxiibkan aadka u daacadsan ayaa degan oo deggan guriga. Whippet-ka waligiis si tababaran looma tababbari karo, waayo waa mid xasaasi ah, jir ahaan iyo maskax ahaanba. Hubso inaad soo bandhigto noocyo badan inta lagu jiro tababarka. Natiijooyinka ugu wanaagsan waxaa lagu gaari doonaa iyadoo lagu daro cayaaraha iyo orodka. Eeyadan waxay ku fiican yihiin carruurta da 'kasta ha ahaadeene mar haddii carruurtu aysan uxasuuqayn ama aysan ku caayayn eeyga. Whippets waa nadiif, macno la'aan ur, waa fududahay in la daryeelo oo sahlan in lala safro. Iyagu waa ilaaliyeyaal wanaagsan oo waxaa laga yaabaa in lagu ilaaliyo shisheeyaha. Way eryan doonaan oo dilaan bisadaha iyo xayawaannada kale ee yaryar haddii fursad la siiyo, laakiin waxay ku fiican yihiin eeyaha kale. Bisadaha guriga lagu soo korsaday ee ay caadeysteen keligood ayaa laga tagi doonaa. Waxaa loo isticmaali karaa in la ugaadhsado. Shakhsiyadda macaan ee Whippet ayaa isaga ka dhigaysa eey wehel fiican ah. Whippet waa orodyahanka kama dambaysta ah, oo aan laga dhaafi karin nooc kasta oo kale oo awood u leh inuu xawaareeyo xawaaraha ugu sarreeya iyo inuu qalloocsado oo uu u leexdo dabacsanaan la'aan. Qaarkood way adkaan karaan in guriga la jajabiyo halka kuwa kalena deg deg loo jajabiyo. Hubso inaad tahay eeygan mid adag, kalsooni leh, oo iswaafaqsan hogaamiyaha xirmada si looga fogaado Cudurka Dog yar iyo dhibaatooyinka dhaqanka . Had iyo jeer xusuusnow, eeyadu waa harooyin, ee maaha dad . U hubso inaad la kulanto dareenkooda dabiiciga ah sida xayawaanka.
Dhererka: Ragga 19 - 22 inji (47 - 56 cm) Dumarka 18 - 21 inji (44 - 54 cm)
Miisaanka: Ragga 25 - 45 rodol (11 - 21 kg)
U nuglaanta calool xanuun iyo dhibaatooyinka maqaarka.
Noocani wuxuu xasaasi u yahay qabowga. Xirashada jaakad ayaa lagula talinayaa xilliga qaboobaha. Eeyahaani wax fiican kuma qaban doonaan aqalka dhexdiisa haddii si ku filan loo jimicsado. Whippets waa degan yihiin gudaha guriga iyo daarad yar ayaa sameyn doonta.
Whippet-ka sida xayawaanka la haysto waa inuu helaa fursado joogto ah oo uu si bilaash ah ugu ordo dhulka bannaan (aagga nabdoon) iyo sidoo kale socod socod maalinle ah xadhig. Waa indho indheyn oo ceyrsan doonta oo dili doonta xayawaannada yaryar sidaa darteed deyr ood leh ayaa lagama maarmaan ah.
Dharka Whippet ee jilicsan, ganaaxan, gaagaaban ayaa u fudud in la xannaaneeyo. Is xoqin joogto ah oo dhan oo leh jajab qoyan ayaa ka ilaalin doonta jaakad dhalaalaysa. Ku caday burush adag, oo maydh markii loo baahdo oo keliya. Koodhka loo yaqaan 'Whippet' ayaa gebi ahaanba ka xor ah 'urta doggie.' Noocani waa celcelis daadiya.
Whippet-ka waxaa la soo saaray dhammaadkii qarnigii 19aad iyada oo loo marayo ka gudubka dhexdooda Greyhound , ah Talyaani Greyhound , iyo eey kale oo nooca terrier-ka ah. Magaceedu wuxuu ka soo jeedaa oraahda ah 'karbaash', oo macnaheedu yahay 'dhaqso u soco.' Whippet waa orodyahan caan ku ah orodka masaafada gaaban, wuxuu gaaraa xawaare dhan 37 mayl saacaddii (60 km saacaddii), xawaarahaasna wuxuu ku gaaraa ilbiriqsiyo! Koorsada eydan waxay ahayd nooc madadaalo ah oo khamaaris ah oo loogu talagalay fasalada hoose ee England waxaana Whippet lagu naanaysi jiray 'orodka ninka saboolka ah.' Whippet-ka waxaa aqoonsaday AKC sanadkii 1888-dii iyo Naadiga Kennel-ka Ingriiska 1891-kii. Hibooyinka Whippet ka mid ah waxaa ka mid ah: ugaadhsiga, aragtida, ilaalinta, tartanka, firfircoonida iyo sasabashada sasabashada.
Jade the Whippet puppy at 14 toddobaad jir
Piper the Whippet oo baxsad ah!
Tylko Ty Maanta Whippet-ka, sawir waxaa iska leh Magda Kruszewska, Poland
Zoe the Moonlight Ypsylon, sawirka waxaa iska leh Magda Kruszewska, Poland
Tylko Ty Maanta, xushmad sawir Magda Kruszewska, Poland
somali bulldog isku dane weyn
Pippi Whippet madow iyo caddaan ah oo jira 1 sano
Comet the Whippet oo ku fadhiya buundo
Daphne the Whippet, sawirka waxaa iska leh Lagniappe Whippets iyo Norwich Terriers
Eeg tusaalooyin badan oo Whippet ah
Whippet Sawirada 1
Whippet Sawirada 2
Whippet Sawirada 3
badh dachshund badh cocker spaniel
jaalle shay ingiriis ah bulldog mix
muxuu shaashadda u eg yahay?
waa maxay mastiff ah ingiriisiga
3 sano jir eey feeryahan